Qiimaha Tijaabada Websaydhka Bilaashka ah. Martech Zone
Arbacada, Juun 13, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Tani waa dood sii socota oo ka careysiisa markay tahay internetka… maxaan u bixiyaa xalka markaan isticmaali karo mid bilaash ah? Waxaan isticmaalnaa codsiyo badan oo bilaash ah - laakiin marka la eego khibradayada xagga warshadaha, waxaan u maleynayaa inaan ka reebanahay sharciga. Hay'ad ahaan, waxaan si buuxda uga faa'iideysaneynaa tikniyoolajiyadda aan u aragno inay waxtar leedahay oo aan u shaqeyneyno si aan u caawinno macaamiisheenna.
Marar aad u tiro badan waxaan aragnaa macaamiisheenna oo ka faa'iideysanaya xalalka bilaashka ah oo ay u la'yihiin aqoon ay u adeegsadaan ama fahamka saameynta ay ku yeelan karto dadaalladooda guud ee suuqgeynta. Xaaladdan oo kale, dadka ayaa ku Maxymiser waxay sameeyeen falanqeyn ku saabsan lacag bixinta iyo tijaabinta websaydhka lacag la'aanta ah waxayna ogaadeen in macaamiisha celceliska imtixaanka la bixiyay ay heleen 600% natiijooyin fiican. Taasi ma noqon karto wax lala yaabo, in kastoo. Barxad weyn ayaa sida caadiga ah leh khubaro kaa caawinaysa inaad ku kaxeyso natiijooyinka adoo adeegsanaya barnaamijkooda. Si kale haddii loo dhigo, waxay ku jirtaa dantooda ugu wanaagsan inay hubiyaan inaad si buuxda uga faa'iideysato codsigooda si aad dib ugu hesho maalgashiga weyn. Codsi bilaash ah ma bixiyo taas!
Tags: imtixaanka abimtixaan bilaash ahmaxymiserqiimahaku soo noqo maalgashigaimtixaankaimtixaanka bogga